နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ခရစ်ယာန်များ၏နှိ | Apg29
မကြာသေးမီကငါခရစ္စမတ်နေ့တွင် 2019. ရာအရပျကို ယူ. တကျိပ်တပါးသောခရစ်ယာန်များ၏လူသတ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးရေးသားခဲ့သည် ရိုက်ချက်နှင့်အခြားတစ်ဆယ်halvshöggsခဲ့သူတို့ထဲမှတစ်ဦး ။ အဆိုပါဆောင်းပါးတွင် Facebook ပေါ်မှာအလေးချိန် 5600 ကွဲပြားမှုကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်ရေးသားခြင်း၏အချိန်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါလူသတ်မှုနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်အစ္စလာမ့်ပြည်နယ်အောက်မှာဖြစ်သောဘိုကိုဟာရမ်ကထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
ခရစ်ယာန်များ၏အရေအတွက်ကို 91.100.000 ဖြစ်သော၏နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက် 195,9 လူဦးရေသန်းရှိပါတယ်။ နိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့ဘာသာတရားအစ္စလာမ်နှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစနစ်ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
ခရစ်ယာန်ဘာသာတောင်ဘက်တွင်မြင်သာထင်သာဖြစ်ပါသည်စဉ်ဤ, အထူးသဖြင့်အစ္စလာမ်ကြီးစိုးဘာသာတရားသည်အဘယ်မှာရှိနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့မြောက်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်ထငျရှားပါသညျ။ ခရစ်ယာန်များ၏ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုမှမြောက်ဘက်တွင်တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများနှင့်တောင်ဘက်ပံ့ပိုးမှုများကိုအကြားပြိုင်ဆိုင်မှု။
ဒါကအကြမ်းဖက်မှုကိုမကြာခဏအသက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုကိုနှစ်ဦးစလုံး၏ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ရလဒ်များ။ အကြမ်းဖက်မှုများ၏ရလဒ်အဖြစ်ခရစ်ယာန်တွေကိုလည်းအားဖြင့်မိမိတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆုံးရှုံး, သူတို့ရဲ့ပြည်မှနှင်ထုတ်နေကြသည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများနှင့်ဖယ် facing ဒုတိယ-class ကိုနိုင်ငံသားများအဖြစ်ရှုမြင်အထူးသဖြင့်ရှာရီယာပြည်နယ်များအတွက်မြောက်ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ခရစ်ယာန်,, ။
ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 ခုနှစ်တွင်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးရွာတခုတခုအပေါ်မှာတိုက်ခိုက်မှုအတွက် 106 ကလူကိုသတ်ကြ၏။ ဘိုကိုဟာရမ်အထူးရွာ၌လူတို့သညျဆန့်ကျင်ညွှန်ကြားခဲ့သောတိုက်ခိုက်မှု, နောက်ကွယ်မှဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှု Raiders ရပ်ရွာ ပေး. သူတို့ကိုလုယက်ရှိခြင်းပြီးနောက်မြေပေါ်မှာ 60 အဆောက်အအုံများညှိပြီးပြီးနောက်တစ်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းဧပြီ 2018. တစ်နံနက်ဝတ်ပြုဝန်ဆောင်မှုစဉ်အတွင်း fulaniherdar တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည့်အခါနှစ်ဦးကိုယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်ဆယျ့ခုနစျကိုဝတျပွုသေဆုံးခဲ့သည်။
ဇွန်လ 2018 ခုနှစ်တွင် fulaniherdar 120 ခရစ်ယာန်တွေကိုသတ်ကြ၏။ သူတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့သောအခါသားကောင်များအသုဘမှမိမိတို့လမ်းနေအိမ်အပေါ်ခဲ့ကြသည်။ အသင်းတော်များထပ်မံတိုက်ခိုက်မှု၏ကွောကျရှံ့ခွငျးအဘို့အဘယ်သူမျှမကိုးကွယ်အံ့သောနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏။
ခရစ္စမတ်နေ့တွင် 2019 ခေါင်းဖြတ်နှင့်ပစ်ခတ်မှုအားဖြင့်တကျိပ်တပါးသောခရစ်ယာန်များကိုသတ်ကြ၏။